Maxay Dadku U Qoraan Faallooyinka internetka? | Martech Zone
Haddii aadan u maleynaynin in dib u eegista internetka ay tahay heshiis weyn… kaliya fiiri macmiilkayaga, Liiska Angie, oo hadda ah shirkad dawladeed oo si adag ugu tiirsan xog ururin tayo sare leh oo dib u eegista lagu kalsoon yahay. Iyo xaqiiqda ah inaysan ogolaan dib-u-eegis aan qarsoodi ahayn ama dib-u-eegis ay sameeyaan xubno aan lacag bixinaynin ayaa ka dhigaya khiyaanooyinka iyo khiyaanooyinka khibrad aan caadi ahayn. Macaamiishooda ayaa jecel iyaga… kaliya weydii.
Muddooyinkii dambe, waxay umuuqataa in kastoo macaamiil aad iyo aad u tiro badani ku soo qulqulayaan goobaha dib u eegista ee internetka, shirarka iyo barnaamijyada si ay ula wadaagaan ra'yigooda ku saabsan adeegyada ay soo mareen Laakiin sida ay noqotay, qof kastaa si gaar ah uma waddo dhibco ama bilaash.
Haddii aad shirkad tahay, gaar ahaan mid maxalli ah, oo aanad dushaada ka ilaalinaynin sumcaddaada internetka - waxay kuu sharxi kartaa wax badan. Haddii aad leedahay dib-u-eegis dhibaato leh, waxay hoos u jiidi doonaan iibkaaga. Macaamiisha ayaa jecel dib u eegista waxayna u adeegsadaan iyaga inay sameeyaan go'aamo wax iibsi maalin kasta. Kaaga dib u eegista ma aha inay ahaato mid qumman, laakiin waa inay noqdaan kuwo lagu kalsoonaan karo oo si wanaagsan loo qoray. Haddii aad haysatid qaar qallafsan oo aan si fiican u matalin alaabadaada ama adeegyadaada, waxaad u baahan doontaa inaad shaqeyso adigoo ka codsanaya macaamiisha adiga ku jecel.
Waa kuwan stats aad u wanaagsan tan infographic laga soo qaatay Demandforce dib u eegista:
Tags: dalbashoFaallooyinka internetkaReviews
Jun 18, 2012 at 9: 31 PM
Dib u eegista khadka tooska ah waa dariiqa dabka lagu hubiyo in shirkadaha dib loogu soo celiyo albaabka sawirka oo dib loogu baaro istiraatiijiyadooda suuq geyn. Eeg waxa shaqeeya, oo arag kuwa aan shaqeynin. Waxaan u maleynayaa in dadku u jiitaan inay qoraan dib u eegista khadka tooska ah maxaa yeelay waxaan jecel nahay wadaagida wax kasta oo wanaagsan oo aan hadda la kulannay, ama waxaan dooneynaa oo keliya inaan horey uga sii digno dadka kale haddii ay wax xun yihiin. Had iyo jeer waxay la noqotaa baahida aadanaha ee isku xirnaanta & wadaagista.